Esinye sezici ezibaluleke kakhulu, okuyinto ngokuya ukugxila lapho design ekhishini iyona ukukhanyisa. Kubaluleke kakhulu ukuba ukuhlela nokubekwa umthombo wokukhanya, isiqondiso sayo, umfutho nokukhanya. Phela, uma kukhona ezingeni enganele ekamelweni lakhe ngeke kubonakale amnyama futhi ifenisha - buthuntu.
Ngaphezu kwalokho, ukungabi nayo ekukhanyeni ekhishini noma ukuhlakazwa ezimbi sokucasuka ukukhathala egumbini zabantu ngenxa iso umthwalo.
Uma sikhuluma ukusetshenziswa njalo ekhishini inhloso yazo, zokupheka kwansuku, ukubaluleka Ukusabalala egcwele ebusweni umsebenzi asikwazi overestimated. It is, ngaphandle kokungabaza, kufanele ecatshangwe futhi osungulwe ngokunembile.
Ngenxa yalezi zimo, i-strip LED ekhishini kuqashelwa ochwepheshe abaningi futhi abathengi esingcono kakhulu ekhishini ukukhanyisa.
Modern ukukhanyisa izixazululo udaba
Ifa iminyaka eminingi ukuthuthukiswa design kungaba kubhekwe ukusetshenziswa ezimbili izinhlobo imithombo ukukhanya emaqaqasini ekhishini: ukukhanyisa nokuthi kuwe kutholakele ukukhanyiselwa.
Imisebenzi yazo sobala. Umsebenzi oyinhloko we ukukhanyisa ukugeleza jikelele yokukhanya egumbini, ukukhanyisa yakhelwe ukufeza indima zokuhlobisa noma lula ukusebenza ngezenzo ezahlukahlukene ethize (yokusingatha imikhiqizo ngobuningi nemimese, ukusika imifino encane, umntwana izinombolo izinzwa, izinto search ngaphakathi ikhabethe).
Phakathi imithombo eyinhloko ukukhanya zihlanganisa:
-Daylight obuhlukahlukene umfutho uyeza efasiteleni.
Eyodwa ngen ekamelweni wonke ophahleni.
izibani Ceiling, ezibangela ongaphakeme isikhundla isibani ngqo phezulu endaweni yokudlela.
Ngaphandle kwayo, izwe ongeke ukwenze, kodwa ngokuvamile akwanele. Yingakho abanikazi zokuhlala, izindlu kanye namahhovisi ngokwethukela asesebenzisa ukufakwa sokukhanyisa:
Afakwa izindonga noma amakhabethe spotlight.
Ukufakwa iribhoni LED ngezindlela ezahlukene.
Zonke izinhlobo izibani ephathekayo nezibani.
strip LED ekhishini: izizathu ukuthandwa
I-agumenti main esivuna emapheshana LED kungenziwa ngokuthi ukuthi, okuyinto akusho ukuthi i-ukuhlela nokubekwa yabo, ukudweba izikimu eziyinkimbinkimbi wanquma emigodini ifenisha. LED strip zokukhanyisa ekhishini kungenziwa agibele amahhashi kalula ekupheleni umsebenzi wokulungisa noma kunoma yisiphi isigaba Igumbi msebenzi.
Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo kwasemuva has izinzuzo ezilandelayo:
Izinga eliphezulu okujula nokukhanya.
Ukuzinza lapho kushintsha izinga lokushisa kanye voltage.
Lesikahle for ukukhanyisa inhlangano ekhishini
Ubungcono ubuchwepheshe eziphambili ukukhiqizwa uholé yokuthi LED strip ekhishini ingafakwa cishe noma kuphi, kungakhathaliseki ukuthi ukuthambekela ebusweni, izinga layo, khona umswakama noma okusezingeni eliphezulu lokushisa ziyezwana. I degree of ukumelana kudabuke wayezimisele ngokuhambisana mshini isicelo ngesikhathi enza.
Kukhona amateyipu, LED avalwa i abicah nangokuvikela, ngakho ngaphakathi idivayisi amanzi uwela. amateyipu okunjalo kungaba ngokuphepha ibekwe eduze nosinki owakhelwe nesitofu, kulula kakhulu ukuhlanza ukungcola.
Ngokuvamile 220V strip LED isetshenziselwa ukukhanyisa obusebenzayo noma zokuhlobisa, amakhabethe odongeni amakhabethe isikhala elingaphakathi, amatafula isizinda ndawo, Uphahla lwangaphakathi okwesikhashana, ibha zokubala.
Izimiso eziyisisekelo LED ukukhanyisa ukufakwa
Ukukhweza strip LED ilula futhi akudingi ulwazi olujulile kakhulu lezifunda kagesi e idivayisi.
Kuyinto njalo ngokwanele amathuluzi kakhulu elula (isibhamu okuyisisekelo, insimbi nokunamathisela ngomthofu), nangokuvikela izinto (ngethephu enamathelayo noma cap ekhethekile), kanye tape kabili emaceleni, uma iteyipu ngokwalo isicelo ungqimba ingcina. Esimeni lapho umthombo wokukhanya uhlela ukuvala lephrofayela yakho lizokuba amathuluzi adingekayo ukuze kokungathembeki yayo: Drill futhi ukudla.
Ukuze uqale ukufakwa tape emva ngokucophelela metering ebusweni ukukhonza njengoba base.
I ithephu wasika yobukhulu zalungisa futhi ukuhlukanisa onqenqemeni glue phezu akhethiwe.
Ngezinye izikhathi ukulungisa LED strip phezu engalingani ibha metal asetjentiselwe kuba sisekelo.
Iziqondiso ukukhetha nokufaka iyunithi
Abama Iyunithi strip LED, kufanele usebenzise i-algorithm ezivamile kuhlaziywa amandla ayo: kufanele athole amandla imitha elilodwa futhi kuphinde by ubude tape esetshenziswa.
Kulokhu, akudingekile ukulayisha ibhuloki amaphesenti engamakhulu. Ochwepheshe batusa ukunikeza nesilinganiso khulula labangaba ngu-20% iyunithi umthamo uma izinguquko voltage.
Ikhumbula ngokucacile ikhishi asemkhathini umswakama ukumelana block kuyinto efiselekayo ukuze ukhethe noma ukufihla it in imbobo efakwe ngokukhethekile.
LED ukukhanyisa, amakhabethe
Injongo eyinhloko cishe kunoma iyiphi ukukhanyisa ekhishini unikezwa ukukhanya umsebenzi ebusweni. amateyipu LED 220 abhekana ngayo nalesi msebenzi.
Ungasetha emapheshana eziningana ezimfushane noma isicelo esigabeni owodwa ngobude. LED afaneleka zokubhala ukwenza indlela yokuphepha kuphi:
Ngezansi phansi udonga amakhabethe umkhathizwe.
On indiza odongeni.
Ngqo phezu usule.
Ohlangothini Ubuso amakhabethe amatafula.
Ukuphendukela samuntu lapho tape sinamathela ithebula top ngokwayo, kuyafaneleka ukucabanga nendlela kancane ukufihla LED ngokubeka iphrofayli. isilinganiso esinjalo sasiyobonisa ugweme aphuphuthekise ukukhanya okukhulu, ngesikhathi esifanayo uyobavikela tape kusuka umswakama kanye ukungcola ngenakugwemeka.
Ukuze ukulungisa emapheshana nge LED etafuleni kungcono ukusebenzisa imikhiqizo ezingeni medium noma high isivikelo amanzi (basuke okhonjiswe IP65 kanye IP68).
Mount strip LED ngaphansi ikhabethe phezulu
Indlela lapho strip LED efakwe ekhishini ngaphansi amakhabethe engenhla, usebe cishe yakudala.
Lokhu akusona isimanga, ngoba indlela enjalo yokuhlaziya isimo kuvula amathuba amaningi ukusetshenziswa ngempumelelo izinzuzo eziningi lolu hlobo ukukhanyisa.
Okunjalo obandayo itheyiphu LED akudingi ukunemba okukhulu futhi ngokunemba high izibalo, amandla supply zingafakwa kalula ngaphakathi iKhabhinethi, kanye isiqondiso ukukhanya ngokuqondile phezu umsebenzi ukuvikela amehlo ngaphandle kokulahleka ahlukahlukene okujula.
ukukhanyisa okuhlobisa ekhishini
Ukusetshenziswa LED ukuhlobisa ikhishi lakho - isibonelo esiphelele inhlanganisela rationality, ukusebenziseka kanye aesthetics effektnosti.
Abakhiqizi zinikeza anhlobonhlobo LED ngekwetinhloso letehlukene kanye nemingcele ezahlukene. Kususelwa inhloso kanye nendawo nenkanuko edlulele, omunye ungakhetha ethize umfutho LED, amandla, umbala, ijamo kanye nokuvama indawo eteyipini.
Ukubeka strip LED ekhishini njengendlela element zokuhlobisa akuyona bahluke kakhulu kwezinye izinhlobo nokubopha a kwasemuva ezinjalo. Isici esiyinhloko kuba khona dimmer. Lokhu inkinobho elawula ukulandelana imibala Glow LED. Flashing izibani ingase futhi zihlanganisa umbala oyedwa olungelo lakhe umfutho kuyahlukahluka njalo.
I dimmer kufanele sifakwe kanye opholile ugesi kusukela kuye ngendlela efanayo, ukuletha wire.
ikhishi Bright futhi bejabule, nsuku zonke ejabulisa iso, uyakwazi athokozise ngisho Liyana ngoMsombuluko. imizwelo eyakhayo futhi enhle kuwo wonke umuntu emndenini nakanjani kuwufanele umzamo ukuthi uzodingwa ukuhlomisa ekhishini nge kwasemuva LED.
Electronic Ugwayi: ukulimaza noma bazuze?
Ingakanani ikhamera bese ukhetha kungcono
Brandy futhi Coke